मतदाताबाटै जनप्रतिनिधि असुरक्षित - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मतदाताबाटै जनप्रतिनिधि असुरक्षित
असुरक्षित भएको जनाउँदै बाराको पचरौता नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यालय सार्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बोर्डको बैठकले कार्यालय सार्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय बासिन्दाबाटै असुरक्षा महसुस भएपछि नगरपालिका कार्यालय सार्ने निर्णय गरिएको मेयर रमेशकुमार यादवले बताए । कार्यालय सञ्चालन गर्न नै समस्या देखिएपछि सार्ने निर्णय गर्नुपरेको मेयर यादवको भनाइ छ । ‘स्थानीय बासिन्दाबाट थ्रेट आयो, जतिवेला पनि आक्रमण हुन सक्ने भएपछि कार्यालय सार्ने निर्णयमा पुगेका हौँ,’ उनले भने ।
अहिले पचरौता नगरपालिकाको कार्यालय वडा नं. ७ बेनौलीमा छ । नगरपालिकाले त्यहाँबाट तीन किलोमिटर दक्षिण–पश्चिमको वडा नं. ६ पकडियामा सार्ने निर्णय गरेको हो ।
अहिले कार्यालय रहेको स्थान भारतसँगको सीमा क्षेत्रबाट तीन किलोमिटर दूरीमा छ । कार्यालय सार्ने नयाँ स्थान पनि सीमानजिकै पर्छ । त्यहाँबाट तीन किलोमिटरको दूरीमा इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ ।
बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयमा असुरक्षित रहेको जनाउँदै लिखित पत्र पठाउँदासमेत वास्ता नगरिएको मेयर यादवको भनाइ छ । ‘प्रशासनले बेवास्ता ग-यो, त्यसैले सुरक्षित ठाउँमा जान खोजेका हौँ,’ उनले भने ।
किन सारिँदै छ कार्यालय
प्रदेश २ सरकारको १५ शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णयका कारण नगरपालिका कार्यालय सार्ने निर्णयसम्म पुगिएको हो । प्रदेश सरकारले पचरौता नगपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थान किटान गरेको थिएन । बेनौली र पकडियामध्ये एक स्थानमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि ५ कात्तिकमा पकडियाका बासिन्दा आफ्नो गाउँमा अस्पताल बनाउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन नगरपालिका कार्यालय पुगेका थिए । तर, नगरपालिका कार्यालय रहेको बेनौलीका बासिन्दाले पकडियाका बासिन्दालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाउन दिएनन् ।
हातहातमा लाठी लिएर आएका बेनौलीका बासिन्दाले उनीहरूलाई कुटपिट गरे । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोलीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो । झडपमा तीनजना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
त्यसपछि जनप्रतिनिधिमाथि पनि दबाब आएको मेयर यादवले बताए । ‘अस्पताल पकडियामा बनाउन लागेका छन् भन्ने सोचेर बेनौलीका बासिन्दाले थ्रेट दिए । जतिवेला पनि आक्रमण हुने अवस्था आयो,’ उनले भने ।
आज सार्ने तयारी
पचरौता नगरपालिकाले शुक्रबार निर्णय गरे पनि शनिबार भने सार्वजनिक बिदाका कारण कार्यालय बन्द रह्यो । आइतबार सार्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । बनौलीका बासिन्दा भने कार्यालय सार्न नदिने सुरमा छन् । कार्यालय सार्दा तनाव हुन सक्ने स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ । नयाँपत्रिकाबाट